MACLUUMAADKA EEYAHA LHATESE DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka eeyaha Lhatese Dog iyo Sawirro
Lhasa Apso / eeyaha Maltese isku dhafka ah
'Mia waa Maltese / Lhasa Apso isku qas aabaheed wuxuu ahaa Maltese, hooyadeedna waxay ahayd Lhasa. Waxay qiyaastii tahay 5 sano jir sawirkan (inkasta oo ay weli u egtahay eey!) Miisaankeedu yahay ku dhowaad 10 rodol. Waxaan kaliya haysanay iyada qiyaastii 2 ½ sano laakiin ma qiyaasi karno inaan la'aanteed ahaano. Maaddaama aan wax badan ka baranay astaamaha gaarka ah ee labadeeda taranka, waxaan ogaanay in shakhsiyaddeeda ay ka tarjumeyso labadoodaba si isku mid ah. Qaar ka mid ah astaamaheeda Lhasa waxaa ka mid ah u heellan qoyskeeda aadanaha, kalgacalka dadka ay taqaanno (iyo u jilicsanaanta shisheeyaha), feejignaan ahaan ilaalin iyo ilaalinta meelaha ay u aragto inay tahay 'guri,' iyo xoogaa cabsi ah carruurta yaryar iyo eeyaha kale. Dabeecaddeeda dabacsan, akhlaaqda wanaagsan ee akhlaaqda leh iyo u nuglaanta koolkoolinta ayaa tusaale u ah astaamaheeda Malta-ka u eg. Mia waa eey aad iyo aad u jecel oo macaan, laakiin iyadu waxaa ka maqan habdhaqanka ciyaarta ee eeyo badan oo isku nooc ah (in kasta oo lagu yaqaan inay leedahay kacsi xad dhaaf ah oo tamar ah, halkaas oo ay ku ordi doonto daaradda dhowr daqiiqo markiiba!). Waxay ku raaxeysataa socod wanaagsan oo ku wareegsan xaafadda, laakiin waxay ku qanacsan tahay inay guriga joogto. Isku soo wada duuboo, iyadu waa eey gabi ahaanba layaableh iyo wehelkeed, waxaanan dareemaynaa nasiib badan inaan iyada helno!
Lamalese Mareykan ah
Lhatese ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Lhasa Apso iyo Malta . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan . Isku-dhafkan waxaa loo tixgeliyaa inuu ka duwan yahay kan Kyi-Leo® dhasho oo aan laga diiwaan gelin karin Kyi-Leo®Naadiga.
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Lhatese
Diiwaan Geliyaha Nakhshadeeye = Latese
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Ey Dhismaha = Lhatese
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Lhatese
Sophie dheddigga Lhatese (Lhasa Apso / Maltese mix breed) oo ah eey yar oo jirta 12 toddobaad. 'La kulan wax yar Sophie, wuxuu dhashay 28 Febraayo 2016. Sophie waxay jeceshahay inay la ciyaarto qoyska oo dhan waxaana u maleyneynaa in Sophie ay aaminsan tahay inay tahay bisad maadaama ay jeceshahay inay ku ciyaarto marwalba cagaha hore markasta sida bisad. Sophie si aad uwanaagsan ayaa loo dhaqmay, aad bay ufududayd tareenka musqusha adoo adeegsanaya sariiraha Pee Wee Pet maadaama ay guriga joogto marwalba. Waa maxay xayawaanka jecel qoyska ee Lhatese iyo Sophie waxay caddeysay inay tan run tahay illaa iyo hadda.
Isu ururi dheddigga Lhatese (Lhasa Apso / eyga isku dhafka ah ee Maltese) oo jira 7 sano— 'Waxay farxad weyn u keentaa Perth, milkiilayaasha Galbeedka Australia. Nooc qurux badan oo leh dabeecad farxad leh (inta badan). Wuxuu jecel yahay inuu ilaaliyo cuntada, wuxuu noqon karaa mid waswaas badan laakiin waliba caqli badan. '
Isu ururi dheddigga Lhatese (Lhasa Apso / eyga isku dhafka ah ee Maltese) oo jira 7 sano— 'Squish, oo muujineysa dabeecaddeeda wasakhsan iyadoo ku eegaysa jiir darbiga in ka badan saacad iyadoo wejigeedu weyn yahay.'
Jake the Lhatese (Maltese / Lhasa Apso mix) at 1 sano jir— Wuxuu leeyahay dabeecadda ugu macaan waa eeyga dhabta leh - waa inuu kuu dhawaadaa markasta. Ma qiyaasi karno nolosha la'aanteed Jake! '
Lucy the Lhatese (Lhasa Apso / eyga isku dhafan Malta)
Thi sis Mia Maltese / Lhasa Apso isku darka qiyaastii 5 sano. Aabaheed wuxuu ahaa Maltese, hooyadeedna waxay ahayd Lhasa.
'Tani waa Lhatese, Elle Belle. Aabaheed waa Maltese hooyadeedna waa Llasa Apso. Waxay aabbaheed ka jeclaataa cabirkeeda iyo jaakaddeeda, laakiin waxay leedahay midab iyo dabeecad hooyadeed. Waxay jirtaa 13 toddobaad miisaankeeduna waa 2 rodol. 9 oz. sawirkaan. '
Goliath the Lhatese oo ah eey 5 bilood jir ah— 'Kani waa wiilkayga yar ee Goliath. Goliath waa eeyga eyga lil ', wuxuu jecel yahay inuu fuulo sariirta iyo gadaal fadhiiso . Qaangaar ahaan isagu aad buu u yahay madax adag , laakiin isagu wuxuu jecel yahay inuu reerka la joogo inta ugu macquulsan anaguna sidoo kale waanu jecel nahay. '
'Kani waa Lilly my Lhatese at 7 bilood jir. Hooyadeed waa Maltese aabaheedna waa Lhasa Apso. Waanu korsanay markii ay 8 toddobaad jirtay. Aad ayey ugu wanaagsan tahay labadayda carruur ah waana ku faraxsanahay inaan haysto. Dad baa i joojiya markasta oo aan weydiiyo waxa ay tahay iyada oo ah mid aad u qurux badan.
Eeg tusaalooyin badan oo Lhatese ah
Liistada eeyaha Lhasa Apso Mix
Liiska eyda isku dhafan ee Malta
madow iyo cad isku qasan
american bulldog cas sanka qas qas
biinanka yar yar iyo isku-darka rummaanka
eeyaha lo'da australiyaanka ee dhibcaha leh
bulldog lagu qasay ter ter